Kalitao - Hebei Weierli Animal Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Ny rafi-pitantanana kalitao dia ahitana ny lafiny rehetra amin'ny kalitao mifandraika amin'ny fotodrafitrasa, vokatra ary serivisy. Na izany aza, ny fitantanana kalitao dia tsy mifantoka amin'ny kalitaon'ny vokatra sy serivisy ihany, fa koa ny fitaovana hanatanterahana azy.
Manaraka ireto fitsipika manaraka ireto ny fitantanana anay:
1. Fifantohan'ny mpanjifa
2. Ny fahafantarana ny filan'ny mpanjifa ankehitriny sy ho avy no zava-dehibe indrindra amin'ny fahombiazantsika. Politikanay ny hamenoana ny takian'ny mpanjifa sy hihoatra ny vinan'ny mpanjifa rehetra.
Ny fiantohana kalitao dia mitaky ny fampivoarana sy ny fampiharana ny rafitra izay manome fahatokisana ny kalitaon'ny vokatra sy ny fiarovana azy. Izy io dia tratra amin'ny alàlan'ny hetsika voarindra sy voarindra izay napetraka amin'ny rafitra kalitao mba hahazoana antoka fa tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fampandrosoana ny vokatra.
Ny fifehezana kalitao dia ny fifehezana ireo dingana mifandraika amin'ny fanamboarana vokatra sy ny fanombanana ny kalitaon'ny vokatra amin'ny dingana samihafa manomboka amin'ny akora ka hatrany amin'ny vokatra fonosana farany izay mahatratra ny mpanjifa.